Rev. Huai San Nuam – Full Gospel Assembly
သိက္ခာတော်ရဆရာမ ဟွဲစမ်နွမ် (ဆရာမ မီးမီးလေး)
Rev. Huai San Nuam
Categories: Children Ministry, Ordained Pastors
ဆရာမဟွဲစန်းနွမ်း( မီးမီး)ကိုအဖ အရာခံဗိုလ်ဟန်ခန့်ဒါးလ်နှင့် အမိဒေါ်ဒိမ်ငိုက်ကျိန်တို့မှ ကွတ်ခိုင်စစ်ဆေးရုံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ မောင်နှမ (၃)ယောက်တွင်သမီးအလတ်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၆-၈၇ ခုနှစ်တွင် မိထ္တီလာမြို့တပ်တွင်းမူလတန်းကျောင်း၌ သူငယ်တန်းနှင့်ပထမတန်းတတ်ရောက်ခဲပြီး ၁၉၈၉-၉၀ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယတန်းကို အ ထ ကတောင်ကြီးတွင်၎င်း|၁၉၉၀-၉၁ ခုနှစ်တွင် တတိယတန်းကိုကျိုင်းတုံတပ်တွင်းကျောင်း၊ ၁၉၉၂-၉၅ ခုနှစ်တွင် စတုတ္ထတန်းနှင့် သတမတန်းကို အထက(၄)အစိုးရကျောင်းမြစ်ကြီးနား၊ ၁၉၉၆-၉၇ ခုနှစ်တွင်အဌမတန်း နင့် နဝမတန်းကို အထက(၁)တနိုင်း၊ ၁၉၉၈-၉၉ ခုနှစ်တွင် ဒသမတန်းကို အ ထက(၅) မင်္ဂလာဒုံ၌၎င်းတတ်ရောက်သင်ယူခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမူ့ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဧပြီလ တွင် AG သင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးရဲတီဇာာထံမှရေနှစ်ခြင်း မဂ်လာခံယူခဲ့သည်။၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဝိညာဥ်နှစ်ခြင်းအား Home Cellတွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Full Gospel Bible Training Center အပတ်(၈)တွင်တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး Dipploma ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၄္-၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပညာဆည်းပူးခဲ့ရာ B.A(Philo)ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် အချိန်ပြည့်အမူ့တော်ဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး၂၀၁၃. မတ်လ(၁၀)ရက်နေ့တွင် လိုင်စင်ရဓမ္မအမူ့တော်ဆောင်အဖြစ်၎င်း|၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၉)ရက်နေ့တွင် သိက္ခာတော်ရအမူ့တော်ဆောင်အဖြစ်၎င်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးချီးမြှောက်ခံရပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မစ၍ Sanday Schoolစခန်းနှင့် နယ်မြေတာဝန်ခံဖြစ်၎င်း|၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လကုန် (၆)လသာ တန့်ယန်းသဿနာတွင် ကလေးကဏ္ဍအားဖြင့်ဆက်ကပ်ခွင့်ရပြီး ယခုလက်ရှိ တိုက် (၆)အခန်း ၄၀၁၊ ၁၆ လမ်း၊ A-Block ယုဇနဥယာဥ်မြို့တော်နေထိုင်ပြီးပါဝင်အမူ့တော်ဆောင်နေပါသည်။
ဆရာမကိုင်ဆွဲသောကျမ်းချက်မှာ”သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မျက်မှောက်ပြုလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သင်၏လမ်းခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော်မူမည်။” သုတ္တံ ကျမ်း၃း ၆
Position: Evangelist/Church School Teacher